Madashii Garoowe sidee u hirgashay, maxaase kadib la filayaa? | Saadaal Media
Madashii Garoowe sidee u hirgashay, maxaase kadib la filayaa?
Dad Soomaaliyeed oo isugu yimid madal Soomaali leedahay oo dhaqaalaha ku baxayaa Soomaali ka yimid, taasoo Soomaali ku wada hadlayso in la arko waxay ahayd wax la yaab leh, dunidase sida Allaha weyni u abuuray ayaa ah inay tahay sil silad iska daba wareegta, qofkastoo Soomaali ahi korkiisuu taabanayaa inuu isagii yahay oo keliya iyo in cidi la socotay.
Doorashada Puntland ka dhacday 8 Janaayo waxay ahay tii ugu horaysay ee Tigreegii Itoobiya laga tuuray aysan wax saamayn ah ku lahayn, go’aamada iyo hab maamuuska doorashadu u dhacday iyo waxa ka soo baxay intaba. Waxaa kale oo doorashadaasi caddayn rasmiya u noqotay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee wadamada Soomaaliya, Ereteria iyo Ethiopia wada gaareen hir galay, heshiiskaas oo qodobada ku jira ay ka mid ahaayeen in wadan kasta uu kan kale ilaaliyo madax banaanidiisa, sharaftiisa iyo inuusan arrimihiisa gudaha fara gashan, waana tan keentay guusha shirka maanta Garoowe Soomaali isugu tagtay.
Tusaaalaha aan arrintaas ku bidhaamin karo waa ninkii xoogga weynaa ee jiirka ka baqayey, markuu ku istaagayna daqiiqad jiirkii ku dhintay, ninkii farxad ayuu is hayn kari waayey. Dadka Soomaaliyeed farxad darteed waxay arkeen awood intay filayeen ka weyn inay meel isugu tegi karaan oo wax wada qabsan karaan, waana dhacday.
Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mid ah saraakiishii sar sare ee booliiska Soomaaliya soo maray ayaa mar ka waraystay shirarkii Soomaaliya ka dhacay siday kala ahaayeen wuxuu ii sheegay shirkii lagu dhisay dawladdii Sal-balaar ee Alle ha u naxariistee Maxamed Faarax Caydiid uu ahaa shirka keliya ee intii burburku dhacay dad Soomaali ahi gogosha iyo dhaqaalaha ku baxay lahaayeen.
Shirkaan Garoowe wuxuu markiisii hore ahaa caleemo saar, wuxuuse isu bedeley isu hilow iyo dad isu baahnaa fursad ay kuwada hadlaan goob ay ka heleen, iyadoo aan cidina isu sandulayn, wuxuu noqday gogol nabadeed oo aan Qaramada Midoobay soo hindisin.
Shirkii hadda waa dhamaaday, waxaa maalmihii ka danbeeyey socday kulamo gaar gaar ah oo dhinacyadu saacado badan isla qaateen, iyadoo aysan meesha ka marnayn isimada, culimada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo arkay fursadda qaaliga ah ee meesha taal, ayna hal dhagax laba shinbirood kuwada dili karaan, iyagoona madaxweynaha cusub ee Puntland arrintaas kala shaqaynaya.
Kulamadii xafladdii caleema saarka kadib la galay waxay salka ku hayeen in si gun dheer loo wada hadlo, saacado badanna toos looga wada hadlo waxyaabaha lakala tabanayo.
Waxyaalaha dadka hadda Garoowe ku sugan ay sheegayaan in laga wada hadlay waxaa ugu waaweyn qodobbo aad mooddo inay yihiin kuwo guud oo kala ah dhamays tirka dastuurka, sidii loo damaanad qaadi lahaa in 2020 ay wadanka ka dhacdo doorasho qof iyo cod iyo fulinta waxyaalihii horay loogu heshiiyey oo ay ka mid yihiin qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Doodahaan waxaa hadda wada waa qaar ka mid ah hogaamiyayaasha maamul goboleedyada, waana dood sax u muuqata, waxaase jira shaki ay qabaan oo intaas ka gun dheer, kasoo ah in dawladdu ay markasta ka go’an tahay in cid kale ay ku bedesho, waana meesha u baahan in la taabto oo labada dhinacba si geesinimo leh uga hadlaan, odayaasha iyo akhyaarta kale ee hawlaha dhex dhexaadinta wadana looga bahan yahay inay il gaar ah ku eegaan, oo ay tahay milil in la saafo u baahan.
Mucaradka dawladda dhaliila waa kuwo rabitaanno kala duwan leh, qaar jago raadis ayaa maankooda ka guuxaya, kuwo maamulada hogaamiya iyana in jagadooda ay ilaaliyaan ayaa ujeedka koowaad yahay, qaar kale oo raba intaas wax ka duwan oo ah dhaqaale ama qandaraasyo, marka iyagoo dhan la isku daro waa uun wax dan qofeed ah oo aan ahayn rabitaan umadeed.
Garoowe kadib maxaa la filan karaa?
Waxaa abuurantay kalsooni badan oo ka imanaysa qalbiyada dadka Soomaaliyeed, Xalimo Axmed waa hooyo Soomaaliyeed oo aan saaka subaxii hore kula kulmay Eastleigh, waxay deganayd Nairobi 26 sano, waxaa wel wel badan ku haya arrimo amaan oo Kenya ku soo kordhay wayahan, waxay I waydiisay hooyo Garoowe maxaa ka soo baxay, jawaab maan heli karin waayo ma joogin, xog badanna kalama socon, intaanan u jawaabin ayey itiri
“Alle wax san ha ka keeno, halkaan (Eastleigh) wakhti badan in la sii joogayo ma u malaynayee”
Ereyga hooyadaani wuxuu leeyahay dareen, waxaase uu si cad u sharaxayaa in qofkastoo Soomaali ah oo wadanka ka maqan uu haleelay cudur la yiraahdo guryo noqosho, taasna waxay ku xiran tahay sida laamaha dawliga ah ee hadda la haysto loo xoojin karo, waana taas tan dadka Soomaaliyeed uu shirka Garoowe u geliyey rajo wanaagsan.
Magaalada Muqdisho dhinaca xeebta waxaa ku taxan meelaha nolosha iyo ladnaantu aad ugu badan tahay, kasoo bilow xeebta Jaziira oo cirifka koonfureed ah ilaa kawaanka malayga ee bari ee Kaaraan, waa dhul xiran oo ay ku yaalaan safaarado, xarumo iyo goobo dadku u damaashaad tagaan, magaalada dhinaceeda kale ee galbeed waxaa ku teedsan xeryo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waana kuwaas kuwa u bahan nabadda iyo in loo sameeyo nolol, taasoo ku xiran in la dejiyo ismariwaaga, xoogga iyo caqligana la isugu geeyo sidii dalkaan dib loogu wada dhisi lahaa.
Talada kale ee ii muuqata wa in gogoshaan la sii fidiyo, tan xigtana la dhigo Dhuusamareeb oo Soomaali oo dhan isugu tagtaa, iyaguna wax cafiyaan iyana la cafiyaa, kadib loo gudbaa Baydhabo iyo Kismaayo, qaylo dhaanta ugu danbaysana waa hadalkii Faarax Murtiile.